China Aluminium foil ákwà rụpụta na Factory | Jiashun
The aluminum foil mejupụtara iko eriri ákwà adopts pụrụ iche elu mejupụtara technology. Ngwurugwu aluminom mejupụtara dị larịị ma dị larịị, ọkụ na-enwu ọkụ dị elu, ogologo ogologo na ogologo ikuku ike dị ukwuu, ikuku enweghị ike ịbelata, arụmọrụ arụmọrụ dị mma, yana arụmọrụ mmebi ahụ ka mma nke aluminom foil nke iko eriri ákwà na-ukwuu mma mgbe pụrụ iche mgbochi corrosion mkpuchi ọgwụgwọ. N'otu oge ahụ, a na-eji polyethylene na-ekpo ọkụ ikuku na-ekpo ọkụ iji zere ikike nke corrosion na mildew n'elu aluminom foil kpatara mmiri ma ọ bụ ihe mgbaze. Direct na ịpị ịpị mejupụtara nwere ike ịzọpụta ọtụtụ ndị mejupụtara nrapado na-eri nke mkpuchi veneer. Mmiri permeability dị ntakịrị ma a na-ewusi mmetụta mgbochi mmiri: ihe mkpuchi polyethylene na-ekpo ọkụ nke dị n'etiti iko fiber fiber alumini foil dị okpotokpo karịa nke nke izugbe, na mmiri vepo permeability dị obere. Yabụ, mmetụta mgbochi mmiri ka mma yana a na-echekwa ihe mkpuchi dị ka ajị anụ iko.
Arọ (g / m2)
Aluminium foil laminated faiba glaasi ákwà iko eriri eriri ákwà nwere atụmatụ nke ezigbo n'elu, elu ìhè reflective, mmiri na-àmà, airproof na seal.It na-bụ-eji maka okpomọkụ akara veneer na mmiri vepo mgbochi mgbochi oyi akwa nke steamship, ohere, okporo ụzọ, iko ajị anụ , ajị anụ, ajị anụ na-emepụta ihe na rọba.
1. Iguzogide corrosion na abawanye
2. mmiri vepo permeability nta, wusi mmiri vepo mgbochi mgbochi mmetụta
1. Heat mkpuchi ihe 'okpomọkụ akara mkpuchi mkpuchi na mmiri vepo mgbochi mgbochi oyi akwa nke iko ajị, nkume ajị, roba na plastic ngwaahịa na na
2. Mgbaze ọkụ na mgbochi mmiri vepo chọrọ nke ọkụ ọkụ na mmiri dị jụụ na mkpuchi ọkụ chọrọ ụlọ.
Rịba ama: Na mama nke aluminum foil faiba glaasi akwa bụ organic. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ karịrị ogo 80, mama ahụ ga-agbanwe, na aluminom na akwa ga-ekewa.
1.Abu onye ahia ma obu onye mmeputa?
A: Anyị bụ ndị na-emepụta ihe, anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị na usoro mmepụta 6
2.Gịnị bụ nnyefe oge?
A: Ihe dị ka ụbọchị 2-15 mgbe anyị natara ego ahụ.
3.Can ị na-enye sample?
A: Ee, anyị nwere ike ịlele nlele, yana ụfọdụ ihe atụ bụ n'efu, mana anyị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ mbufe.
4. you nwere ike izipu site awara awara?
A: Ee, anyị nwere ike izipu site na mbuga ọ bụla awara awara, oké osimiri ma ọ bụ ikuku.
5.What bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: mentkwụ termsgwọ okwu: T / T 30% -50% ego mgbe iji gosi, itule mgbe ngwongwo dị njikere tupu mbupu ma ọ bụ L / C, ma ọ bụ Western Union maka obere ego.
Nke gara aga: Liquid silicone ntekwasa akwa
Osote: akwa silica faiba glaasi akwa